दे’वर सङ्ग यसरी मा’या’ बसेपछी… – ramechhapkhabar.com
दे’वर सङ्ग यसरी मा’या’ बसेपछी…
माया अन्धो हुन्छ । यो भनाई हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर यो कस्तो माया हो ? जो नाता सम्बन्ध केही कुराको हेक्का नराखी कसैसँग पनि जतिबेलै बस्न सक्ने ? यस्तो मायालाई के माया भन्ने हो ? के यो माया नै हो त ?
भारतको गोरखपुरमा एउटी भाउजुले आफु भन्दा उमेर धेरै नै कान्छो देवर पर्नेसंग माया गाँसिछन् । उनी भर्खरै विविहीत भाउजु पनि हैन । उनी दुई सन्ताकी आमा हुन् । ती आमाले आफ्नो घरको मान मर्यादा, छोराछोरीको भविष्य, आफ्नै र आफन्त सबैको ईज्जत यी कुनै कुराको प्रवाह नगरिकन आफ्नै देवरलाई माया गरेकी छिन् । देवर र उनको उमेर आधाले फरक छन् ।
आफ्नै देवरलाई माया गर्ने ती महिलाको श्रमिानको आज भन्दा ५ वर्ष पहिला निधन भएको रहेछ । श्रीमानको मृत्युपछि उनी एक्कल महिला हुन पुगिन् । तर शारिरीक प्यास बुझाउनकालागी भने उनले आफ्नै देवरसंग माया प्रेमका वार्तालाप गर्न शुरु गरिन् । समाज र दुनियाको वास्ता नगरी ती भाउजु आफ्नो मायामा अगाडि बढिन् । देवरको मायामा पागल भएर विवाह गर्ने फैसला लिइन् । तर देवरले भने भाउजुसँग विवाह गर्ने कुरा सिधै अस्वीकार गरेका छन् ।
घरभित्रको यो गम्भीर विषय गाउँका अन्य मानिसको घरसम्म पुगेको छ । एकतर्फी माया भएकोे आरोप लगाउदै परिवारले पंञ्चायतलाई बोलाए । महिलालाई पञ्चायतले पनि निराशा नाइदिएको छ । पञ्चायतले विवाह गर्ने अनुमति नदिएपछि महिला कानुनको शरणमा गएकी छिन् । जहाँ महिलाहरु जम्मा भएर देवर विवाहको लागि राजी नभएको भन्दै उल्टै गाली गरे ।
परिवारले ती महिलालाई देवरसँग विवाह गराइदिने आश्वासन दिएको छ । गाउँलेहरुले पतिको निधन पश्चात देवर भाउनजुको अनैतिक सम्बन्ध भएको आरोप समेत लगाएका छन् । शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि भाउजुले देवरलाई विवाह गर्ने दबाब दिएकी थिइन् । हाल देवरले भाउजुसँग बोलचाल बन्द गरेका छन् ।